Dastabej » पाँच हजार ८७ कोरोनाका विरामी थपिए, कुन जिल्लामा कति ?
पाँच हजार ८७ कोरोनाका विरामी थपिए, कुन जिल्लामा कति ? – Dastabej
पाँच हजार ८७ कोरोनाका विरामी थपिए, कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौँ, ३० पुस । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप पाँच हजार ८७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । हाल देशभरमा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर र कास्की रहेका छन् भने दुई सयभन्दा बढी उपचारार्थ सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा झापा, चितवान, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, बाँके, रुपन्देही र कैलाली छन् । सून्य सङ्क्रमित रहेका जिल्ला कुनै पनि नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये हाल काठमाडौँमा सात हजार ६२५, ललितपुर एक हजार ९३५ र भक्तपुरमा एक हजार २५१ सक्रिय सङक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २० हजार ५६० जनाको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । तेह्र हजार ४७४ जनाले पिसिआर र सात हजार ८६ जनाको एन्टिजीन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३० पुष २०७८, शुक्रबार १७:२० प्रकाशित